कानुनमा पतिको थरलाई मान्यता : फिर्ता होला त सांसद पद?
बबिता बस्नेत ।
राज्यले लिएको जातीय समावेशीकरणको नीतिका कारण केही नेताका पत्नीहरू अहिले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्न सफल भए भनेर निकै टीका–टिप्पणी भयो । शिक्षा र सभ्यता बढ्दै जाँदा जातीय विभेद निमिट्यान्न हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरूका लागि कोही मानिस कुनै जातविशेषमा जन्मिएकै कारण उसले विभेद भोग्नुपर्ने या अवसर पाउनुपर्ने कुरा हास्यास्पद हो । तथापि हाम्रो सन्दर्भमा विभिन्न समुदायका मानिस विभेदका अनेक चरणबाट गुज्रिएका कारण पछाडि पारिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउन विशेष नीति बन्नु आवश्यक थियो । राज्यले नीति बनायो पनि तर उक्त नीतिको अवधारणा र अभ्यासबीच व्यापक फरक देखियो । अवधारणा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने थियो÷छ, तर अभ्यासमा पहिल्यै मूलधारमा भएका, अगाडि बढेका व्यक्तिहरूलाई अझ अगाडि बढाइयो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट अहिले जनजाति कोटामा परेका केही नेतृहरूको विषयलाई लिएर निकै बहस भयो । झट्ट हेर्दा नेतापत्नी मात्रै जस्तो देखिए पनि समानुपातिकमा परेका नेतृहरूको राजनीतिमा आफ्नै पृष्ठभूमि छ । नेतापत्नी भएका कारणभन्दा पनि राज्यले छुट्याइदिएको जात खस–आर्यसँग विवाह गरेका र राज्यले आदिवासी र जनजाति मानेको थर माइती भएका कारण पृष्ठभूमि राजनीतिक हुँदाहुँदै पनि यो प्रसङ्ग विवादित बनेको हो ।
"त्यसपछि के होला ? के नेतृहरूले पतिकै थर कायम गर्लान् ? या आफ्नो पहिचानका लागि लड्लान् ? आफैँ संसद्मा पुगेकाले कानुनमा संशोधन गर्लान् ? प्रयोगमा आउनै नपाई कानुनको संशोधन गर्दा के अर्थ लाग्ला ? या सांसद पद नै छोड्लान् ? कतै सांसद पद या पति दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि ? रोज्नैपर्ने अवस्था आए के रोज्लान् ?"
महिलाको सन्दर्भमा अहिले उठेको जातीय विवाद र प्रमाणीकरण भइसकेको कानुनले दिएको सन्देश के हो भने आफू सम्मिलित संसद्ले के कानुन पास गर्‍यो भनेर सांसदहरूलाई नै थाहा नहुने रहेछ । यदि थाहा भएको भए आफैँले पास गरेको कानुनविपरीतको कार्य हुने थिएन होला । राजनीतिक दलहरूले यो सवालमा मुलुकी संहितामा के छ भनेर हेरेको पाइएन । यो कानुन लागू भएपछि महिलाको सवालमा इच्छाअनुसार थर राख्न त पाइयो, तर प्रश्न उठ्यो भनेचाहिँ पतिकै थर कायम हुने भयो । अहिले खस आर्य पति भएका आदिवासी जनजाति या दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा भदौपछि (कानुन लागू भएपछि) प्रश्न उठे तत्कालीन अवस्थामा गरिएको भनिएला, तर त्यसपछि के होला ? के नेतृहरूले पतिकै थर कायम गर्लान् ? या आफ्नो पहिचानका लागि लड्लान् ? आफैँ संसद्मा पुगेकाले कानुनमा संशोधन गर्लान् ? प्रयोगमा आउनै नपाई कानुनको संशोधन गर्दा के अर्थ लाग्ला ? या सांसद पद नै छोड्लान् ? कतै सांसद पद या पति दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि ? रोज्नैपर्ने अवस्था आए के रोज्लान् ? प्रश्न धेरै छन् । झट्ट हेर्दा महिलाको मात्रै समस्या देखिए पनि यो अन्तरजातीय विवाह गर्ने पुरुषको पनि समस्या हो । आफ्नी पत्नीको थर के हुने भन्ने विषय सम्बन्धित पुरुषका लागि निश्चय नै चासोको विषय हुन सक्छ । थरको प्रश्न अन्तरजातीय विवाह गर्ने–नगर्ने दुवै महिलाका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो, तर राज्यले निर्धारण गरेको आरक्षणका कारण अन्तरजातीय विवाहमा यो थप महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
प्रस्तुत लेख घटना र विचार अनलाईनबाट साभार गरिएको हो ।